जनप्रतिनिधिकै घरमा ‘छाउगोठ’ ! | जनदिशा
जनप्रतिनिधिकै घरमा ‘छाउगोठ’ !
सुर्खेत, १२ भदौ । वेदराम भण्डारी पश्चिम सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका १० का निर्वाचित वडासदस्य हुन् । सामाािजक विकृति र कुरीति अन्तयका लागि अगुवाई गर्नुपर्ने वडासदस्य भण्डारीकै घरम छाउगोठ छ ।
घरका महिला महिनावारी हुँदा पाँच दिनसम्म छाउगोठमा बस्छन् । स्थानीय सरकार गठनपछि गत बर्षदेखि वडा कार्यालयले छाउपडी अन्त्यका लागि जनचेतनामुलुक कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
तर गाउँमा छाउपडी कुप्रथा अन्त्य हुनुको साटो झन् झन् बढ्दै गएको देखिएको छ । महिनावारी भएको बेला छाउँगोठमा बस्नु हुन्न भनेर वडा कार्यालयबाट जनचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ तर, आफ्नै घरकाले मान्दैनन्, महिनावारी भएको बेला पाँच दिनसम्म छाउगोठमै बस्छन्, वडासदस्य भण्डारीले भने ।, आजको नागरिक दैनिकमा यो खबर छ ।
Previous Previous post: अमेरिका-मेक्सिको सहमति-‘नयाँ सम्झौता गजब र निष्पक्ष हुनेछ’: ट्रम्प
Next Next post: किन खेल्दैनन् शाहरुखले हलिउड फिल्म